Ogaden News Agency (ONA) – Maalintii 1aad ee Siminaarka oo arima muhiim ah looga dooday
Maalintii 1aad ee Siminaarka oo arima muhiim ah looga dooday
Sidaad horaanba ka akhrisateen warbixintii hordhaca ahayd een idiin soo gudbinay waxaa saaka ooy taariikhdu tahay 11/4/2014 kafurmay magaalada Frankafurt ee dalka Germany siminaar iyo aqoon iswaydaarsi balaadhan oo siwanaagsan loosoo agaasimay. Waxaa siminaarkan loogu talogalay kobcinta iyo kor uqaadista tayada iyo wacyiga siyaasiga ah ee masuuliinta iyo hawlwadeen ka kalayimid dhamaan Jaaliyaadka Somalida Ogadenya ee kudhaqan qaarada Yurub.
Maalintii koobaad ee siminaarka waxaa lagu qaadaa dhigay aadna loogu gorfeeyay waxqabadka Jaaliyaadka Yurub. Sidoo kale waxaa warbixino heer sare ah oo cilmiyaysan soobandhigay Hogaanada kaladuwan ee JWXO sida Hogaanka Warfaafinta, Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka, Hogaanka Arimaha Dibada, Hogaanka Dhaqaalaha iyo Hogaanka Cadaalada iyo Arimaha Diinta iwm. Masuuliintii matalaysay hogaanadan ayaa lawadaagay kaqaybgaleyaasha siminaarkan warbixino iyo qorsheyaal wax ku,ool ah oo kusaabsan qorshe hawleedka iyo ajendeyaasha shaqo ee udajisan hogaanadan aan kor kusoo xusnay.
Waxaa galinkii danbe ee maalinta 1aad ee siminaarka iyo aqoon iswaydaarsiga aad looga dooday tubaha ama fursadaha oogu wanaagsan ee lagu kobcin karo laguna horumarin karo wacyiga siyaasiga ah iyo tayada shaqo taasoo iskugujirta bisaylka iyo baraaruga ay leeyihiin hawlwadeenka iyo masuuliinta Jaaliyaadka Somalida Ogadenya ee nasiibka uhelay inay fursadan qaaliga ah kafaa,iidaystaan.
Wajiga 1aad ee siminaarkan iyo aqoon kororsigan maanta kafurmay Frankfurt ayay kasoo wada qaybgaleen Hawlwadeenka jaaliyaadka Yurub oo maanta siguud looga wada hadlay warbixinada iyo qorsheyaasha udajisan hay,adaha iyo Hogaamada JWXO.
Waxaa lagu soo gabagabeeyay aqoon iswaydaarsigii maalinta 1aad ee siminaarkan loogu talogalay kobcinta iyo kor uqaadista garaadka iyo wacyiga guud ee Masuuliinta iyo Hawlwadeenka Jaaliyaadka Yurub. Jawiga siminaarka maanta oo aad uwanaagsanaa ayaa haduu eebuhu yiraahdo socon doona mudo 3 bari ah waxaana laguwadaa in maalinta Axada ah lasoo gabagabeeyo haduu eebuhu yiraahdo. Hamoogaanina Warbixintaanada danbe.